Posted by Cameron at 13:454comments:
Posted by Cameron at 12:142comments:
Posted by Cameron at 12:115comments:
Posted by Cameron at 14:057comments:
Posted by Cameron at 11:49 1 comment:
မျက်မှန်ဘောင်ခပ်ကြီးကြီးတပ်ပြီး ဆံပင်တွေဖွာလန်ကောက်ကွေးနေတဲ့ စတိုင်လ်ထူးခြားတဲ့ လူငယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ကျွန်မစပြီးသတိထားမိခဲ့တာကြာပါပြီ…။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်မတို့သူငယ်ချင်းတွေမဟုတ်ကြသေးပါဘူး…။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မျက်မှန်းတမ်းမိကြ ရုံလေးပါ…။ ကျွန်မတို့စသိချိန်မှာ… ကျွန်မက အသည်းကွဲနေတဲ့အချိန်ပေါ့…။ သူဟာ ကျွန်မရဲ့ အသည်းကွဲဝေဒနာကို တခဏအတွင်းပျောက်ကင်းအောင် ကုသပေးတဲ့ ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆရာဝန်လေး အနေနဲ့ သူကျွန်မဘ၀ထဲကို တိုးတိတ်စွာချင်းနင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တာပါ….။
ကျွန်မတို့ရင်းနှီးပြီး အချိန်တိုတစ်ခုအတွင်းမှာပဲ ကျွန်မကို နူးညံ့သောပန်းတစ်ပွင့်နဲ့အတူ သူ့ကဗျာလေးထဲခေါ်ဆောင် အသက်သွင်းခဲ့ပါတယ်….။ ကဗျာဆရာတစ်ယောက် မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း သူ့ရေးဖွဲ့သီကုံးတတ်တဲ့ ပန်းကလေးအကြောင်း အပိုင်းဆက်တွေနဲ့ ကဗျာရှည်ကြီးကို သူငယ်ချင်းအတော်များများ လာအားပေးပြီးဖတ်ကြတယ် ပြီးတော့ … အရမ်းလည်းကြိုက်ကြတယ်..။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး သူငယ်ချင်းတွေက သူ့ကဗျာလေးထဲက ဇာတ်ကောင်နာမည်နဲ့ပဲ သူ့ကိုခေါ်တတ်ကြတော့တယ်…။ ထိုနည်းတူစွာပဲ ကျွန်မရေးသားသော စာတွေထဲမှာ သူဟာ ကျွန်မရဲ့ ဇာတ်ကောင်နေရာကို နေရာယူလာခဲ့တယ်…။
ကျွန်မ၏ကဗျာဆရာရေးတဲ့ ကဗျာနုနုတွေကို မဖတ်ရတာ……….
ကျွန်မ၏ဓါတ်ပုံဆရာကိုယ်တိုင် ရိုက်တဲ့ စကားပြောတဲ့ ပန်းချီကားချပ်တွေကို မကြည့်ရတာ……. ကျွန်မ၏ဒေါက်တာ ကျွန်မရဲ့ အသည်းကွဲဝေဒနာကို အနာကျက်တဲ့ အထိ မကုစားခဲ့တာ………
Posted by Cameron at 17:025comments:
အစာပလာအကုန်ထည့်ပြီး ကိုရီးရမ်းအန်တီတွေလို့ အားပါးတရနယ်ပါလေ့... .နှစ်ဆယ့်လေးနာရီအခန်းအပူချိန်မှာထားပြီးစရင် ရေခဲသတ္တာထဲသ်ိမ်းပြီးစားလို့ရပါပြီ။
နောက်တစ်ခါကျ တီတင့်လုပ်တဲ့ နည်းလေးလုပ်ကြည့်ဦးမယ်...။
Posted by Cameron at 11:10 1 comment:
တခါတခါကျ မင်းပါးပြင်နှစ်ဖက်ကို ကိုယ့်လက်ဖ၀ါးတွေနဲ့အုပ်ပြီး လင်းလက်နေတဲ့ မင်းမျက်ဝန်းတစ်စုံကို တည့်တည့်စိုက်ကြည့်ပြီး မင်းကို…ကိုယ်သိပ်ချစ်တဲ့အကြောင်းတွေ တဖွဲ့တနွဲ့ပြောပြချင်တယ် သိလား…..။ ပြီးတော့… သံစဉ်ချိုချိုတွေကို ဖွဲ့သီတတ်တဲ့ မင်းနှုတ်ခမ်းထူထူတစ်စုံရဲ့ ချိုမြမှုကို မြည်းစမ်းကြည့်ချင်သေးတယ်…။
Posted by Cameron at 15:35 1 comment:
Posted by Cameron at 13:593comments: